Marihina aloha fa efa nahoraka teto an-tanàna ity resaka ity vao iny hitanareo rehetra iny vaovaon'ny fanafihana iny. Dia io no lohahevitra nibahana tamin'ny kidaona maraina araka ny tatitra nataon'ny namana mpiara-miasa. Niady hevitra momba io i Francis turbo sy gothlieb. Nolazain'i Francis ary fa efa fiché na fantatry ny jiolahy avokoa ny mpikambana amin'ny GIR sy ny FIP rehetra (groupe d'intervention rapide sy force d'intervention de la police). Toy ny manana QG ry zalahy izany! efa samy manana ny talentany ihany koa ny rehetra. Misy ny misahana manokana momba ny akanjo halatra, na jean, na blouson, misy ny satroka, ny ravaka volamena. Koa raha misy zavatra voaroba dia efa fantatry ry zalahy ireo hoe aiza ny lalan'iny halatra iny. Koa tsy mahagaga raha misy olona mitaraina amina "olo-pantatra" fotoana fohy aorian'ny fanendahana ny fandrobana dia tafaverina iny afaka kelikely satria "bandy akama" no nokitihanareo.
Misy ihany koa ny manamarika fa manana mpiray tsikombakomba ao amin'ny mpitandro ny filaminana mihitsy ry zalahy ireo. NIsy manko araka ny filazana fanangonana ny fitaovam-piadiana rehetra tany amin'ny mpitandro ny filaminana hanamarihana ny laharan'ny basy sy izay mitazona azy. Dia nangonina avokoa ny fitaovam-piadiana rehetra teny ampelatanan'ny polisy nanerana an'i Madagasikara. Tamin'io fotoana io no nisy nanafika ny manamboninahitra iray tsy nanana ny basiny intsony. Ny jiolahy kosa moa nanana ny azy, voa ny mpitandro ny filaminana tamin'iny indray mandeha iny.
Misy indray raha voahodidina ny jiolahy dia miantso ny laibany izay any andafy izy. Ka raha manorotoro ny toerana misy azy ilay jiolahy dia anjaran'ilay any andafy ny manoro azy ny lalana alehany ary dia tafatsoaka tokoa ilay voahodidina avy eo. Izany hoe manana "fanampim-baovao" tsy ampoizina ilay any andafy. Inona angaha no ampiasainy amin'izany?
Ny mahaketraka ny mpitandro ny filaminana hafa kosa dia ny fahafantarana tsotra izao ny tompon'ny basy (amin'ny mpitandro ny filaminana ihany) nefa dia tsy voakasika mihitsy iny tompom-basy iny. Io moa no miteraka ny ahiahy hoe ao amin'ny laiban'ny mpitandro ny filaminana ihany koa no misy be vinany. Manginy fotsiny ny fahafahan'izay voasambotra ka mampihorohoro izay nisambotra afaka andro vitsivitsy monja na dia tratra ambodiomby izao aza. Io no mahatonga ny sasany te-hanajedaka avy hatrany izay tratra ambodiomby satria lasa mitaintaindava ihany koa ry zareo rehefa fantany fa afaka izay nosamboriny, saingy matetika moa dia betsaka ny namany no misakana azy tsy hanao izany fihetsi-pahatezerana izany.
Fa na izany na tsy izany dia mety ho tsy mbola vita ity lahatsary "Tana terminator" ity sa dia hanjavona miaraka amin'izay ny jiolahy?